Tag: doka google | Martech Zone
Tag: doka google
Talata, Jona 1, 2021 Talata, Jona 1, 2021 Douglas Karr
Ny kaonty dia tsy mandray fanapahan-kevitra, ny olona no manapa-kevitra. Ny programa Marketing-based Marketing (ABM) mahomby dia manaraka ny kaonty amin'ny sehatra stratejika fa miresaka amin'ny olona amin'ny ambaratonga fanatanterahana. Influ2 dia mamaritra azy io ho programa ABM misy vahaolana avo lenta izay ahitana ny lohan-danja: Mandoko ny vondrona mpividy. Mihoatra lavitra ny fisafidianana ireo kaonty lasibatra: mpanapa-kevitra manokana momba ny fanapahan-kevitra, misy vondrona mividy ny kaonty kendrenao. Mankanisa ny famaritana persona an'ny ICP anao hanambatra ny lisitry ny mpanapa-kevitra
Tao amin'ny fandalinana fahefatra nataony momba ny zava-bitan'ny indostrian'ny mpivarotra tao amin'ny Google Ads, Sidecar dia nanoro hevitra ireo mpivarotra e-varotra handinika indray ny paikadin'izy ireo sy hahita ny toerana fotsy. Ny orinasa dia namoaka ny fikarohana tamin'ny tatitra Benchmarks 2020: Google Ads in Retail, fanadihadiana feno momba ny zava-bitan'ny sehatry ny antsinjarany ao amin'ny Google Ads. Ny valin'ny sidecar dia manondro lesona manan-danja ho an'ireo mpivarotra am-bidy hodinihina mandritra ny taona 2020, indrindra ao anatin'ny tontolo iainana namorona ny COVID-19. 2019 dia nifaninana kokoa noho ny teo aloha,
Ny fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa sy ny automatisation fitazonana Optimove
Zoma, Aogositra 26, 2016 Zoma, Aogositra 26, 2016 Douglas Karr
Iray amin'ireo haitao mahavariana sy mandroso kokoa hitako tao amin'ny IRCE dia Optimove. Optimove dia rindrambaiko miorina amin'ny tranonkala ampiasain'ny mpivarotra mpanjifa sy ireo manam-pahaizana amin'ny fitazonana mba hampitombo ny orinasan-tserasera amin'ny alàlan'ny mpanjifany efa misy. Ny rindrambaiko dia manambatra ny kanton'ny varotra sy ny siansa momba ny angon-drakitra hanampiana ireo orinasa hampitombo ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny lanja mandritra ny androm-piainany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny varotra mihazona azy manokana sy mahomby. Ny fampifangaroana teknolojia tsy manam-paharoa amin'ny vokatra dia misy ny maodely ho an'ny mpanjifa mandroso, ny famakafakana ny mpanjifa mialoha, ny kendrena ho an'ny mpanjifa,
Inona ny fiantraikany sy ny fomba hafa amin'ny fanakanana doka?
Sabotsy, Oktobra 24, 2015 Sabotsy, Oktobra 24, 2015 Douglas Karr
Ny mahatsapa ny Internet nefa tsy manelingelina anao isaky ny fotoana fohy ny dokambarotra dia toa mahafinaritra. Mampalahelo fa tsia. Amin'ny alàlan'ny fanakanana doka marobe, ny mpanjifa dia manery ny mpanonta hanao hetsika henjana. Ary rehefa namela ny fanitarana finday finday Safari an'ny iPhone ny iOS 9, dia nihanahazo tsena ho an'ireo mpampiasa finday ny fanitarana fanakanana doka - fitaovana fampitomboana doka avo lenta. Ny tombana iray dia milaza fa very $ 1.86 miliara amin'ny fidiram-bolan'i Etazonia tamin'ny fanakanana ny doka tamin'ny 2014. Mpamoaka
Google dia namoaka ny valin'ny andrana vaovao izay manaitra tokoa ary tokony hojeren'ny olona rehetra manitatra ny fahazoana horonantsary ny finday. Raha tsorina, ny maodelin'ny dokam-barotra amin'ny tarehy omaly dia tsy mandeha amin'ny finday fotsiny. Miara-miasa amin'ny Mountain Dew, BBDO dia namokatra horonantsary telo samihafa. Ny voalohany dia ny fametrahana doka amin'ny fahita lavitra amin'ny finday. Ny faharoa dia nanipy doka avy hatrany ho an'ireo mpijery finday